Baaq ay soo saareen USC/SSA(Muddullood)-Sweden-.
Posted to the Web 09:05 GMT December 17, 2001
Ujeeddo: Baaq ay soo saareen USC/SSA(Muddullood)-Sweden-
Galabtii axadda 16.12.2001 oo ahayd maalin ciid ah ayaa waxaa shir iskugu yimid xubnaha ururka USC/SSA Muddullood ee deggan magaalada Gothenburg iyo nawaaxigeeda.
Shirkaasi waxaa looga hadlay :
Shirka ka socda Nairobi ee dalka Kenya
Kooxda CARTA oo gobol ay shaqo ku lahayn dad u magaacawday.
-Xubnaha ururka waxay ka munaaqashoodeen shirka ka furmay dalka Kenya ay iskugu tagayaan kooxo Somaali ah oo aanan jirin gobol iyo dad ay matalaan, hormoodna ay ka tahay kooxda CARTA
Intaasi kadib waxaa fikrado la iska dhaafsaday oo la isla gartay in Kooxda CARTA ay ku tahay caqabad hortaagan is-maamul goboleed loo sameeyo gobolka Banadir iyaga oo adeegsanaaya probogaanda iyo laaluush iyo kala qaybinta dadyow walaala ah .
-Xubanaha ururka USC/SSA-Mudullood ee ku nool dalka Sweden waxay ku waafaqeen go`aanka ay qaateen walaalahooda Muddullood ee dalka jooga oo ah in aan laga qayb gelin shirkaasi ka socda Nairobi inta Kooxda CARTA ay sheeganayso dawladnimo aan jirin, iyo inta ay weli hortaagan tahay Is-maamul goboleed madax bannaan in laga sameeyo gobollada dalka.
Waxaa kale oo loogu baaqayaa Kooxda CARTA in ay joojiso fara gelinta arimaha gobolka Banaadir. Haddii qof mas`ul ah xil loo dhiibaayo ama laga qaadayo waxaa hawshaasi iska leh dadyowga u dhashay gobolka Banaadir, iyaga ayaa xulanaaya cidda xilka gobolka u qabanaysa.
Ugu dambayn, xubnaha ururka USC/SSA- Muddulloodka Skandinavia ma diidana in ay Somaali heshiiso, waxaana xalka keliyah ee Somaliya ku heshiin kartaa uu yahay Is-maamul goboleed madax bannaan.
Somaali ha midowdo, hana guulaysato.
Xiriiriyaha USC/SSA-Muddullood (Skandinavia)
Adan Mohamed Ibraahim " Oor "
Tel. 004631-154314 Gothenburg-Sweden